Maxay tahay sababta MW Farmaajo u xanibay lacago loogu talagalay M/goboleedyada & Sirta DENI? | SMC
Home WARARKA MAANTA Maxay tahay sababta MW Farmaajo u xanibay lacago loogu talagalay M/goboleedyada &...
Maxay tahay sababta MW Farmaajo u xanibay lacago loogu talagalay M/goboleedyada & Sirta DENI?
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay u xayiran tahay lacago deeq ah oo dowlad Goboleedyada dalka loogu tala-galay.
Isaga oo warbaahinta kula hadlay Saciid Deni Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Maamul Goboleedyada aan weli lasoo gaarsiin lacag Baniga Adduunka u siiyay Soomaaliya, isla markaana la xanibay.
Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda ayuu ku eedeeyay Maadxweynaha Puntland inay lacagtaas xanibtay, isla markaana lacagta ay ku jirto Baniga dhexe, wuxuuna sheegay in hadii ay lacagtaas sii xayirnaato inay helis ku noqon doonto in mar kale la is-aami waayo.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka inay lacagta deeqda ah ee Baniga Adduunka dowladda u marsiisayay dowlad Goboleedyada dalka inay fasaxdo, iyadoona lacagtaas lagu wax farabadan loogu qaban doono shacabka.
Previous articleMadaxda Hirshabeelle iyo Galmudug oo kusii jeedda Baydhabo
Next articleMadaxweynaha Hirshabeelle oo gaaray Baydhabo iyo Shir ka furmaya